Wararka Puntland oo ka hadashay Geerida Wasiir ka tirsanaa Maamulkaas - HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Wararka Puntland oo ka hadashay Geerida Wasiir ka tirsanaa Maamulkaas
Wararka Puntland oo ka hadashay Geerida Wasiir ka tirsanaa Maamulkaas
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo ku hadlaya magaca Xukuumadda iyo kan Shacabka Puntland, waxa uu ka tacsiyaynayaa Geerida Wasiirkii Deegaanka, Beeraha iyo Isbedelka Cimilada Puntland Ismaaciil Diiriye Gama’diid oo goordhoweyd caabuqa covid-19 ugu geeriyooday Muqdisho.
Dhinaca kale Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan (Karaash) ayaa uga tacsiyeeyey guud ahaan shacabka Puntland gaar ahaan qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday wasiirkii wasaarada Deegaanka iyo Isbedelka Cimilada Puntland Marxuum Ismaaciil Diiriye Gama’diid oo ku geeriyooday Magaalada Muqdisho.
“Waxaan uga tacsiyaynayaa guud ahaan shacabka Puntland gaar ahaan qoyskii iyo iyo eheladii uu ka geeriday Marxuum Ismaaciil Diiriye Gama’diid Wasiirkii Deegaanka iyo isbedelka Cimilada”.
Madaxweyne Ku-xigeenka ayaa illaahay uga baryey inuu naxariistii janno ka waraabiyo.
“Waxaan illaahay uga baryayaa inuu dembigiisii dhaafo janatul firdowsana ka waraabiyo dadkiisa iyo dalkiisa uu u shaqaynayayna samir iyo iimaan ka siiyo”.
Alle ha u Naxariistee Wasiirkii deegaanka iyo beeraha Puntland Ismaaciil Diiriye Gama’diid ayaa waxaa la sheegay in saameyn hab-dhiska neefsashada ah uu ku reebay Cudurka oo uu muddo uu la jiifay Magaalada Garoowe,waxaana uu kamid ahaa wasiiradii uu Magacaabey Madaxweyne Deni sidoo kale uu la soo Shaqeeyay Dowladii Kacaanka,isaga oo ka tirsanaa Wasaaradda Waxbarashada iyo Deeqaha Qaranka.
Previous articleDuqeymo lala beegsaday Saldhigyo Al-Shabaab (Akhriso)
Next articleMaxkamada ICJ oo diiday dalab halis ah oo Kenya ka gudbisay dacwada Badda